Cawaaqibta cunno xumo iyo sida loo saxo | Ragga Stylish
Maxay yihiin cawaaqibta cuntada liidata? Waan ognahay in cunnadu ay fure u tahay caafimaadka, nafaqada oo aan ku filnayn waxay sababi kartaa dhibaatooyin badan oo jirka ah.
Cunto xumo iyo cunnooyinka qashinka ah ayaa lala xiriirinayaa cimriga nolosha oo gaagaaban. Baadhitaanku shaki yar buu uga tagayaa, markaa aynu si dhow u eegno cudurada ay sii kordhayaan qaddarkoodu marka waxa ugu badan ee aad cuntid ay yihiin kuwo aan caafimaad qabin.
1 Cuntadaadu ma xun tahay?
1.1 Ka taxaddar cuntooyinka warshadaysan
1.2 Immisa sodium ah ayaad qaadataa?
1.3 Miyaad cuntaa subag badan?
2 Calaamadaha cunto xumo
3 Cawaaqibta halista ah ee cunno xumo
3.1 Cunto xumida waxay sii xumaynaysaa cudurada raaga
Cuntadaadu ma xun tahay?
Dadku waxay yeelan karaan cunto xumo sababo badan awgood. Marar badan waxaa sabab u ah waqti la'aan, taas oo ka dhigaysa cuntada degdegga ah xal wax ku ool ah (laakiin waxyeello leh). Sabab kasta ha noqotee, waa inaad sameysaa wax walba oo aad kari karto si aad ugu beddesho cunto wanaagsan.
Cunnooyinka leh heerka dhimashada sare ee kuwa hodanka ku ah cusbada, dufanka ama sonkorta (ama dhammaantoodba). Cunnooyinka ay isku dheelitir la'aanta ka dhexeysa karbohaydraytyada iyo faybarku sidoo kale yihiin kuwo soo noqnoqda, xaalad (taas oo ah ku xadgudubka cuntada degdegga ah iyo cuntooyinka warshadaysan ay leedahay waxyaabo badan oo la sameeyo) taas oo kordhinaysa halista u adkeysiga insulin-ta iyo nooca sonkorowga 2aad.
Ka taxaddar cuntooyinka warshadaysan
Fiiri maqaalka: Cuntooyinka warshadaysan. Halkaas waxaad ka heli doontaa sababta ay waxyeellada u leeyihiin iyo waxa la sameeyo si aad naftaada u ilaaliso.
Immisa sodium ah ayaad qaadataa?
Ku darida milixda cuntada waa hab raqiis ah oo fudud oo lagu kordhin karo dhadhankiisa, laakiin cawaaqibta ka timaadda isticmaalka soodhiyamku waa mid aad u khatar badan, oo ka soo baxda dheecaanka jirka illaa kororka cadaadiska dhiigga, taas oo dhaawaceysa xaaladda wadnaha iyo nidaamka wadnaha guud ahaan, qaasatan haddii qofku qabo dhiig kar. Tan ugu xunna waa inaad badiyaa cuntaa milix ka badan intaad moodeysid, tan iyo Waa maado ka muuqata ama ku qarsoon alaabada dukaamada waaweyn badankood.
Marka, haddii aad runtii rabto inaad hagaajiso cuntadaada, inaad si fiican u barato jiritaanka milixda ku jirta waa bilow fiican. Dareenkan, waxaa habboon in maskaxda lagu hayo taas waxaa lagugula talinayaa inaadan dhaafi karin 2.300 miligram oo sodium ah maalin kasta. Xusuus qor xusuus ah in muddo ah ayaa kaa caawin doonta inaad ogaato inaad ka weyn tahay maalmaha ugu badan ee usbuuca, sidaas darteed waa waqtigii tallaabo la qaadi lahaa si loo yareeyo cusbada.
Miyaad cuntaa subag badan?
Dhinaca kale, dufanka trans, ee ku jira cuntooyin badan, oo ay ku jiraan shiilannada Faransiiska, waxay sare u qaadaan kolestaroolka LDL ama kolestarool xun waxayna yareeyaan kolestaroolka HDL ama kolestaroolka wanaagsan Qashin-qubka, halista cudurka wadnaha iyo, markale, nooca sonkorowga 2 cirka ayuu isku shareeraa. Laakiin maahan oo keliya waxa aad cunayso waxay saameyn ku leeyihiin, laakiin sidoo kale waxaad cunin. Waana in cilmi-baaristu ay sidoo kale tilmaamaysaa cuntooyinka ku yar miraha, miraha, khudradda, lowska iyo iniinyaha sida aadka u dhaawaca caafimaadka. Sidan oo kale, habka looga baxsado cunno xumida iyo cawaaqibkeeda waa in la yareeyo jiritaanka cuntada la warshadeeyay lana kordhiyo jiritaanka cuntada dhirta.
Calaamadaha cunto xumo
Jirku wuxuu soo saaraa calaamado markii nafaqada la bixiyo ay aad u liidato. Ma jiraa mid iyaga ka mid ah oo adiga aqoon u leh? Iska hubi si aad u ogaato haddii cuntadaadu u baahan tahay isbeddel deg deg ah dabcan:
Timo qallalan iyo ciddiyo jilicsan
Caloosha oo adkaata
Jawaabta difaaca jirka oo gaabisa
Finanka iyo cambaarta
Cawaaqibta halista ah ee cunno xumo
Muddada gaaban waxay leedahay cillado badan, laakiin Waqtiga la qabanayo ayay tahay in cawaaqib xumada ka dhalata cuntada liidata ay dhab ahaan aad u xumaato.
Cunista si aan habbooneyn waxay kordhisaa halista in la horumariyo dhibaatooyinka caafimaad iyo cudurada ka dhasha la'aanta nafaqooyinka sida birta, folate, vitamin C, fitamiin K, kaalshiyamka iyo dabcan fiber.
Sidaa awgeed, haddii cunto xumo ay sii socoto waqti ka dib (xadka wuu kala duwanaan karaa iyadoo ku xiran qof walba), halista in lala kulmo dhibaatooyin caafimaad iyo cudurro ayaa sii kordhaya. Maaddaama ay yihiin kuwa ugu muuqda, cawaaqibta ugu caansan ee la og yahay waa cayilnaan iyo cayilnaan. Cunto xumo ayaa badanaa qaadata kalooriyaal xad-dhaaf ah oo u horseedi kara miisaanka oo kordha, gaar ahaan haddii lagu daro qaab nololeed deggan. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira saameyn kale oo xun, sida kuwa soo socda:
Cadaadis dhiig oo sareeya
Nooca sonkorowga 2
Noocyada kansarka qaarkood
Cunto xumida waxay sii xumaynaysaa cudurada raaga
Qof kastaa waa inuu ka taxadaraa cunnadiisa, isagoo sameynaya wax walba oo karaankiisa ah si uu uga dhigo mid caafimaad qaba oo kaladuwan, laakiin dadka leh sababaha ugu badan ee looga mamnuuco cunnooyinka qashinka ah cuntadooda oo ay doortaan cunnooyinka caafimaadka qaba ee u dhigma waa kuwa dhibban. nooc ka mid ah cudur. Sababta ayaa ah cunista cunno liidata waxay siixunaysaa cudurada raaga, sida dhiig karka iyo nooca 2aad ee sonkorowga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Cawaaqibta cunno xumo